📕ဝတ္ထု - နန္ဒာစိုး(ဆင်ဖြူကျွန်း)၊ 📝ဇာတ်ညွှန်း - အောင် SS၊ 🎬ဒါရိုက်တာ - ကိုဇော်(အရုဏ်ဦး)၊ 🌟သရုပ်ဆောင်များ- ကျော်ရဲအောင် နေမင်း ခိုင်သင်းကြည် ခင်လှိုင် ဂွမ်းပုံ Watch more Myanmar movies online at : http://bit.ly/3cFYPjG Watch other movies such as : ကြင်နာဦးရဲ့ကမ္ဘာ : https://youtu.be/mm4tOYGuH84 အချစ်ရဲ့ကိုယ်ရေးရာဇ၀င် : https://youtu.be/bhxDERoF-h8 မင်္ဂလာပါ, ရွှေစင်ဦး ရုပ်ရှင် ရုပ်သံလိုင်းရဲ့တင်ဆက်မှုတွေကို ကျေနပ်နှစ်သက်မှုရှိပါရဲ့လား? ချစ်ပရိသတ်တို့အတွက် ကောင်းနိုးရာရာလေးတွေကို ရွေးချယ်တင်ဆက်ပေးသွားပါ့မယ်။ ကျွန်ုပ်တို့ကို ကူညီတဲ့အနေနဲ့ Like, Share & Subscribe လုပ်ပေးသွားဖို့ မေတ္တာရပ်ခံပါရစေ။ ယခု ချန်နယ်မှ ထုတ်လွှင့်မှုတိုင်းဟာ သင့်အတွက် အခမဲ့ဖြစ်ပါတယ်။ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ Hi again guys Are you enjoying watch Myanmar movies on Shwe Sin Oo channel? We'll be posting more Shwe Sin Oo movies and movies from other companies too. Like, Share & Subscribe to help us out. This channel is free for all of our fans. Haveanice day! #myanmarmovies #shwesinoomovies #shwesinoo #myanmar #myanmarvideo
Cultural show at Karaweik Palace, Yangon, Myanmar
The Sawbwas of Hsipaw lived in the Hao Sao Pha / Shan Palace / ဟော်နန်း at the northern end of Hsipaw. The last Sawbwa or Prince (Sao Kya Seng) disappeared during the military coup in 1962 and the palace is cared for by his nephew, 'Mr. Donald' (Sao Oo Kya), and his nephew's wife - who is now the host for late afternoon visitors. She tells visitors the story of the Shan State over the last 50 years, explaining specifically the history of the last sawbwa and their family (NOTE: The audio might be hard to hear w/o headphones given the background noise and I was atadistance). https://www.irrawaddy.com/features/hispaw-haw-abode-of-tragic-shan-prince.html Its also recommended to check out the memoirs of the last Sabwa's Austrian wife, Inge Sargent, called "Twilight over Burma: My Life asaShan Princess." It'samoving personal account of her life in Burma up till her husband's disappearance.
recorded on 28.2.2018 https://karaweikpalace.com/ Karaweik Palace, Yangon, Myanmar, traditional dances
🌟သိုက်ကလာတယ် စကားမပြောဘူး⚡️ Can't Talk Because He's From Nat Palace 🎬 Myanmar Movies - New
Buffet at Cultural show at Karaweik Palace, Yangon, Myanmar
Visiting the Shan Palace PlusaShan Princess (Hsipaw / သီပေါ)
📕ဝတ္ထု - နန္ဒာစိုး(ဆင်ဖြူကျွန်း)၊ 📝ဇာတ်ညွှန်း - အောင် SS၊ 🎬ဒါရိုက်တာ - ကိုဇော်(အရုဏ်ဦး)၊ 🌟သရုပ်ဆောင်များ- ကျော်ရဲအောင် နေမင်း ခိုင်သင်းကြည် ခင်လှိုင် ဂွမ်းပုံ Watch more Myanmar movies online at : http://bit.ly/3cFYPjG Watch other movies such as : ကြင်နာဦးရဲ့ကမ္ဘာ : https://youtu.be/mm4tOYGuH84 အချစ်ရဲ့ကိုယ်ရေးရာဇ၀င် : https://youtu.be/bhxDERoF-h8 မင်္ဂလာပါ, ရွှေစင်ဦး ရုပ်ရှင် ရုပ်သံလိုင်းရဲ့တင်ဆက်မှုတွေကို ကျေနပ်နှစ်သက်မှုရှိပါရဲ့လား? ချစ်ပရိသတ်တို့အတွက် ကောင်းနိုးရာရာလေးတွေကို ရွေးချယ်တင်ဆက်ပေးသွားပါ့မယ်။ ကျွန်ုပ်တို့ကို ကူညီတဲ့အနေနဲ့ Like, Share & Subscribe လုပ်ပေးသွားဖို့ မေတ္တာရပ်ခံပါရစေ။ ယခု ချန်နယ်မှ ထုတ်လွှင့်မှုတိုင်းဟာ သင့်အတွက် အခမဲ့ဖြစ်ပါတယ်။ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ Hi again guys Are you enjoying watch Myanmar movies on Shwe Sin Oo channel? We'll be posting more Shwe Sin Oo ...
The Sawbwas of Hsipaw lived in the Hao Sao Pha / Shan Palace / ဟော်နန်း at the northern end of Hsipaw. The last Sawbwa or Prince (Sao Kya Seng) disappeared during the military coup in 1962 and the palace is cared for by his nephew, 'Mr. Donald' (Sao Oo Kya), and his nephew's wife - who is now the host for late afternoon visitors. She tells visitors the story of the Shan State over the last 50 years, explaining specifically the history of the last sawbwa and their family (NOTE: The audio might be hard to hear w/o headphones given the background noise and I was atadistance). https://www.irrawaddy.com/features/hispaw-haw-abode-of-tragic-shan-prince.html Its also recommended to check out the memoirs of the last Sabwa's Austrian wife, Inge Sargent, called "Twilight over Burma: My Life as...
📕ဝတ္ထု - နန္ဒာစိုး(ဆင်ဖြူကျွန်း)၊ 📝ဇာတ်ညွှန်း - အောင် SS၊ 🎬ဒါရိုက်တာ - ကိုဇော်(အရုဏ်ဦး)၊ 🌟သရုပ်ဆောင်များ- ကျော်ရဲအောင် နေမင်း ခိုင်သင်းကြည် ခင်လှိုင် ဂွမ်းပ...
The Sawbwas of Hsipaw lived in the Hao Sao Pha / Shan Palace / ဟော်နန်း at the northern end of Hsipaw. The last Sawbwa or Prince (Sao Kya Seng) disappeared duri...
📕ဝတ္ထု - နန္ဒာစိုး(ဆင်ဖြူကျွန်း)၊ 📝ဇာတ်ညွှန်း - အောင် SS၊ 🎬ဒါရိုက်တာ - ကိုဇော်(အရုဏ်ဦး...
The Sawbwas of Hsipaw lived in the Hao Sao Pha / Shan Palace / ဟော်နန်း at the northern en...
recorded on 28.2.2018 https://karaweikpalace.com/ Karaweik Palace, Yangon, Myanmar, tradit...
🌟သိုက်ကလာတယ် စကားမပြောဘူး⚡️ Can't Talk Because He'...
Buffet at Cultural show at Karaweik Palace, Yangon...
Visiting the Shan Palace PlusaShan Princess (Hsi...
Cultural show at Karaweik Palace, Yangon, Myanmar...